किन ब्राजिलीहरु विश्वकपको विरोध गर्दैछन् ? – MySansar
किन ब्राजिलीहरु विश्वकपको विरोध गर्दैछन् ?
Posted on June 18, 2014 by mysansar
अहिले सबैको आँखा विश्वकपमा छ। नेपालीहरु पनि रातरातभर नसुतेर विश्वकपमा रमाइरहेका छन्। आफूले समर्थन गरेको देशका जर्सी र झण्डा बोकेर र्‍याली निकालेको समेत देखिएको छ। विश्वकप भइरहेको देश ब्राजिलको चमकदमक पनि कम देखिएको छैन। पहेँलो जर्सीमा सजिएका च्वाँक केटीहरु! जताततै उज्यालो। विश्वकपको विरोध ब्राजिलमा भइरहेको छ भन्ने खबर पनि सानोतिनो समाचारका रुपमा पढ्नु भएको होला। आखिर किन गर्दैछन् त उनीहरु आफ्नै देशमा भइरहेको विश्वकपको विरोध?
गेट्टी इमेजेसका मारियो तामाले खिचेका यी केही फोटोले तपाईँले टेलिभिजनमा अहिले देखिरहनुभएको ब्राजिलको भन्दा बेग्लै तस्बिर देखाउँछ।
ब्राजिलीहरुको दैनिक जीवनका यी फोटोहरुले तपाईँलाई त्यहँको यथार्थ बताउने छ।
ब्राजिल जस्तो विकास नभइसकेको देशमा यस्ता प्रतियोगिता आयोजना गर्दा पर्यटकको बाढी, पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने दावी गरिन्छ।
फुटबल ब्राजिलको एउटा धर्म जस्तै हो। कयौँ पटक यसले विश्वकप जितिसकेको पनि छ। तर पनि लाखौँले यो विश्वकप आफ्नो देशमा आयोजना हुनुलाई वाहियात भनेका छन्। धेरैले यसलाई करको रकम भ्रष्ट नेता, जग्गा दलाल, होटल साहुहरु, यौन व्यापारका दलालहरु र करमा छुट पाउने संस्था फिफाको हातमा पर्ने जालो मान्छन्। अघिल्लो विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाले ३९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्‍यो। तर त्यहाँको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म त्यसको प्रतिफल पाएको छैन। ब्राजिलले त त्यसको तीन गुणा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ।
यी फोटोहरुले त्यहाँको गरिबी, असमानता, प्रहरी दमन देखाउँछ। विश्वकपका लागि प्रहरी लगाएर हिं‍सात्मक तरिकाले गरिबहरुलाई उनीहरु बसेको ठाउँबाट हटाइएको थियो।
12 thoughts on “किन ब्राजिलीहरु विश्वकपको विरोध गर्दैछन् ?”
विश्वकप आयोजक देशरुले त आफ्नो लगानी भन्दा धेरै बढी कमाउछन् रे. ब्राजिल चै यसको अपबाद हो कि बिरोध गर्नेले नबुजेको हो?
बिश्वब्यापी सिद्धान्त ” गरिबी होइन, गरिब लाइ हटाऊ ” 😉
यो त के हो कतार ले बिस्व कप गराउने बेला निस्कन्छ फोटो haru
कतार ले बिस्व कप गराउदा किन निस्किनु नि तेस्तो फोटो / कतार त सम्पन्न साली देस हो जहाँ बिस्वो को सबै भन्दा बेक्ती बेसी आए स्रोत भाको देस हो / कतार का जनता कोहि पनि गरिब छैनन् . तेस्तो फोटो निकालन लाई/
शासकहरु जहाका पनि यस्तै हुन्…..र तिनीहरु गरिब र निमुखा जनताका हुन सक्दैनन् तिनीहरु त ठुलाठालु र दलाल का पुजारी हुन्….तिनीहरुले गरिबी देख्दैनन न त गरिब नै…..अरुले देख्ला भनेर गरिबलाई दुर दराज मा बिस्थापित गर्छन न कि गरिबी निर्मुल गर्न प्रयाश…आखिर त्यत्रो रकम जनताको उन्नतिका लागि खर्चेको भए राम्रो हुनेथियो होला नि
गरिबले सित्तैमा पाएर हात्ती पाल्न खोजेपछि यस्तै हो/
शासक बर्ग विवेकी नहुने रहेछन कहिका पनि फुटबल त अन्त गएर खेल्दा पनि जितेकै थिए वर्ल्ड कप आयोजनामा खर्च हुने त्यहाको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्चेको भए राम्रो हुने थियो ।
Netra Dahal says:
पक्कै पनि जनता भन्दा फुटबल ठुलो होइन | गरिब जनता भएका देशहरुले फुटबल आयोजना गर्नु गल्ति पनि त होइन नि! नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्ष हरेक कुरामा हुन्छ |
साह्रै मन छुने कथा र तस्विर । विश्वबाट कैले अन्त हुन्छ गरिवीको ??
ब्राजिलका गरिब केटीहरु र नेपालका मोडेलहरुको कपडा चाही उस्तै उस्तै हुदो रैछ
तिनीहरु त खानदानी गरिब नि हौ ….
जहाँ पनि यस्तै हो पुजीपतिहरु को मस्ती छ गरिबहरु को भोकमरी ले तद्पिराखेको छन् !